२०७५ साउन १६ गते बुधवारको प्रतीक दैनिक
एकीकृत सम्पत्तिकरलगायतमा विवाद भएपछि महानगरपालिका संशोधन र स्थगन गर्न तयार
प्रस, वीरगंज, १५ साउन/ वीरगंज महानगरका मेयर विजय सरावगीले आज पत्रकार सम्मेलन गरी हाल विवादको विषय बनाइएको महानगरको कर सम्बन्धमा केही कर स्थगन, संशोधन गर्ने निर्णय गरेको बताएका छन् । आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मेयर सरावगीले करसम्बन्धी कुरामा विवाद बढेपछि महानगरपालिकाले वातावरण प्रदूषण, सडक मरम्मत सुधार, डिजेल, पेट्रोल, डन्डी, सिमेन्ट र कुखुरामा लगाएको शुल्क स्थगन गर्ने निर्णय गरेको र सोलाई बुधवार बस्ने कार्यपालिकाको बैठकमा अनुमोदन गराउने बताए । उनले एकीकृत सम्पत्ति कर सम्बन्धमा हाल उठेको विवादपछि महानगरले लगाएको घरजग्गा करको सट्टा मालपोत कार्यालयले निर्धारण गरेको मूल्याङ्कन, मापदण्ड अनुसार नै लिने बताए । उनले व्यवसायिक कर परिमार्जन गर्न र कबाडीकर निकासीको सम्बन्धमा पनि कार्यपालिका बैठकमा प्रस्ताव लगिने जानकारी गराएका छन् । उनले वीरगंज महानगरको सन्दर्भमा हाल केही दिनदेखि पत्रपत्रिका, टेलिभिजन र सामाजिक सञ्जालहरूमा उठाइएको कुराहरू शतप्रतिशत सत्य नभएको बताए । उनले महानगरले जन्म, मृत्यु दर्ता सम्बन्धमा कुनै कर नलगाएको र पुरानो व्यवस्था अनुसार सो काम भइरहेको बताए । मेयर सर
नेका पर्साद्वारा विरोध प्रदर्शन, अधिनायकवाद स्वीकार्य छैन– वक्ताहरू
प्रस, वीरगंज, १५ साउन/ नेपाली काङ्ग्रेस, पर्साले केन्द्रीय कार्यक्रम अनुरूप आज वीरगंजमा प्रदर्शन र विरोधसभा गरेको छ । घण्टाघरबाट निकालिएको विरोध प्रदर्शन नगरपरिक्रमापछि सोही स्थानमा पुगेर कोणसभा गरेको थियो । कोणसभाका वक्ताहरू केन्द्रीय सदस्य रमेश रिजाल, अजय चौरसिया, पूर्वमन्त्री सुरेन्द्र चौधरी, पूर्वसांसद अनिल रूँगटा, पूर्वसभापति जनार्दनसिंह क्षत्री, वीरेन्द्रलाल नेपाली र पटेर्वा सुगौली गापाका उपाध्यक्ष्F ममता महतोले वर्तमान नेकपा नेतृत्व सरकारको कडा आलोचना गरेका थिए । उनीहरूले सरकारले प्रजातन्त्रविरुद्ध गतिविधि गरेर मुलुकमा अधिनायकवाद लाद्न खोजेको र सो कार्यलाई नेकाले कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्ने बताए । वक्ताहरूले विश्वबाट कम्युनिज्म पलायन भइरहेको अवस्थामा नेपालमा उदय भएको र त्यसको उन्माद कम्युनिस्ट सरकारमा देखिएको बताउँदै नेपालको सबैखाले परिवर्तनमा अहम् भूमिका रहेको नेकाले अहिलेको अवस्थामा पनि प्रजातन्त्र गुम्न नदिन जनताको साथ लिएर सरकारविरुद्ध जेहाद छेड्ने बताए । केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा फोरम नेपाल सरकारमा सहभागी भएको र राजपाले सरकारलाई समर्थन दिएकोले उनीहरूको
गरिबी र गर्मी
विनोद गुप्ता अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको अनुमान अनुसार सन् २०३० सम्म विश्वव्यापी श्रमिक उत्पादकत्वको रूपमा २ ट्रिलियन अमेरिकी डलर बराबरको नोक्सानी हुनेछ । यसको कारण विश्वको बढ्दो तापक्रम अर्थात् ग्लोबल वार्मिङलाई बताइँदैछ । भारतको २८३ वटा मौसमी केन्द्रहरूबाट लिइएको तथ्याङ्क अनुसार सन् १९५१ देखि २०१० सम्मको प्रत्येक दशकमा दिल्लीको तापक्रम मानक (ज्भबत क्ष्लमभह) गर्मीमा ०.६ सेल्सियम र वर्षायाममा ०.५५ सेल्सियसले बढिरहेको पाइएको छ । त्यसैगरी भारतकै हैदराबादको तापक्रम मानक सन् १९५१ देखि २०१० सम्म प्रतिदशक ०.६९ डिग्री सेस्लियसले बढिरहेको पाइएको छ । हुनेखाने अर्थात् धनाढ्य वर्गले कार्यालय, घर, गाडीमा वातानुकूलन प्रणाली प्रयोग गरेर यसबाट त्राण पाउँछन् तर यसबाट निस्किने तातो हावा फेरि वायुमण्डलमैं गइरहेको हुन्छ र यसको प्रभाव फेरि मध्यम र न्यून आय वर्गलाई नै परिरहेको हुन्छ । यसप्रकार बढिरहेको तापक्रमले मध्यम र न्यून आयवर्गका श्रमिक र कार्मिकहरूको स्वास्थ्यमा जोखिम थपेर उनीहरूको जीविकोपार्जनमा प्रतिकूल असर पारिरहेको छ । दक्षिण एसियाको मौसमी अध्ययनले यसरी ठूला–ठूला शहरहरूमा यही गतिले तापक्र
बूढा पुरानाहरू आप्mनो थलो छाड्नुहुँदैन भन्दथे । किनभने थलोमा थिति बसेको हुन्थ्यो । तर प्रारब्ध प्रतिकूल भयो भने थातथलो पनि छोड्नुपर्छ । नेपालको राजनीतिमा त्यस्तै भएको छ । राजनीतिमा निरन्तर परिवर्तनले शासन व्यवस्थामा अन्योल ल्याइदिएको छ । राजनीतिको अन्तिम परिणतिले अधिकार प्राप्तिको असङ्ख्य द्वार खोलिदिएको छ । तर कुन द्वार भएर जाने भन्ने अन्योल उत्पन्न भएको छ । यसलाई शासन व्यवस्थामा आन्तरिक सङ्क्रमणको रूपमा हेर्नुपर्छ । पुरानो थातथलोमा मानिसको आचारविचार, रहनसहन, क्ष्Fमता तथा वस्तुको प्राप्यताको सम्भवना निर्दिष्ट हुन्छ । नयाँमा ती सबैको जोहो गर्नुपर्छ । पुरानोको दायित्वको भारी हुन्छ भने नयाँमा अधिकारको प्रशस्ति । नयाँको अधिकारले दायित्वलाई एक छिनका लागि बिर्साइदिन्छ । यहींबाट सङ्क्रमण शुरु हुन्छ । यो ठूलो सङ्क्रमण होइन, समयक्रममा आफैं छुट्टिंदै जान्छ, तर लामो समय लियो भने राज्यमा थरीथरीको किचिलो उत्पन्न हुन थाल्छ । त्यसैले राजनेताहरूले यसको त्वरित समाधान खोज्नुपर्छ । समानता र समावेशिताको आधारमा सबैलाई अधिकार र दायित्वको बोध गराइदिंदा यसले समस्याको रूप लिन पाउँदैन । अहिले हामीले पु
२०७५ साउन १५ गते मङ्गलवारको प्रतीक दैनिक
वीरगंज महानगर र उवासङ्घको वार्तामा समझदारी, निर्णय अनुमोदनको लागि कार्यपालिकामा प्रस्ताव लगिने
प्रस, वीरगंज, १४ साउन/ वीरगंज महानगरपालिका र वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घलगायत विषयगत संस्थाहरूबीच आज भएको करवृद्धि सम्बन्धी वार्तामा समझदारी भएको छ । वीरगंज महानगरपालिकामा भएको वार्तामा मेयर विजय सरावगीले वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घलगायत विषयगत संस्थाहरूले प्रस्तुत गरेको ज्ञापन सम्बन्धमा नगरसभाबाट पारित आर्थिक ऐनमा एकीकृत सम्पत्ति करको विषयमा मालपोत कार्यालय, पर्साले कायम गरेको मूल्याङ्कनलाई आधार मानेर संशोधन गर्ने कुरा बोर्ड बैठकमा छलफलका लागि प्रस्तावको रूपमा लग्ने निर्णय भएर वार्ता सकिएको छ । मेयर सरावगीले ज्ञापनपत्र र छलफलमा उठेका कुराहरूमध्ये सङ्घले एकीकृत सम्पत्ति कर सम्बन्धमा मालपोत र महानगरको मूल्याङ्कन भिन्न भएको जिकिर गरेको बताए । उनले वार्तामा कबाडीकर खारेजीको माग गरिएको र सबै माग उद्योग वाणिज्य सङ्घले लिखितरूपमा प्रस्तुत गरेको खण्डमा महानगरपालिका र कार्यपालिकाको बोर्ड बैठकमा छलफलका लागि प्रस्ताव लग्ने सहमति भएको बताए । वीउवासङ्घका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्माले ज्ञापनपत्रमा प्रस्तुत गरिएबमोजिम एकीकृत सम्पत्ति कर, कबाडीकर, सवारीकरजस्ता विषयगत सङ्घसंस्थासँग आबद्ध मागहरू
कलैयामा ७ महिलासहित १२२ जनाद्वारा रक्तदान
प्रस, वीरगंज, १४ साउन/ सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र, कलैयाको आयोजनामा आज सम्पन्न रक्तदान कार्यक्रममा ७ महिलासहित एक सय बाइसजनाले रक्तदान गरेको रक्तसञ्चार केन्द्र वीरगंजका प्रमुख प्रवीण मानन्धरले बताए । रामरहिम संस्थाको सहकार्यमा सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रले स्व. बनारसी साहको स्मृतिमा रक्तदान कार्यक्रम गरेको हो । कार्यक्रम केन्द्रका अध्यक्ष्F महम्मद सगीरको अध्यक्षतामा भएको थियो भने प्रमुख अतिथि सांसद रामसहाय यादवले रक्तदान गरेर कार्यक्रमको उद्घाटन गरेका थिए । उद्घाटन कार्यक्रममा बाराका प्रजिअ गणेश भट्टराई, रामरहिम संस्थाका जङ्गबहादुर यादव, ब्लोदान पर्साका सचिव अरविन्द सिंह, सहसचिव उमेश गुप्तालगायतको सहभागिता थियो । आयोजित रक्तदान कार्यक्रममा मनोज साह, मुन्ना गुप्ता, सुरेन्द्रकुमार, राकेश कुशवाहा, राधेश्याम चौधरी, प्रमोद दाहाल, सुनील ढकाल, सायरा बानो, रामशङ्कर केसी, विष्णु थापा, विकेश यादव, राजु साह, हरेन्द्र महतो, रन्जित सिंह राठौरलगायतले रक्तदान गरेको रक्तसञ्चार केन्द्र वीरगंजका प्रमुख मानन्धरले बताए ।
पोखरियामा अहेब र एचएबीच विवाद
प्रस, पोखरिया, १४ साउन/ पोखरिया नगरपालिकामा सिनियर अहेब र एचएबीच विवाद शुरु भएको छ । सरकारले सिनियर अहेबको स्तरोन्नति गर्दै छैठौं श्रेणीको दर्जा दिएको तर अध्ययनको हिसाबले एचए पाँचौं तहमा भए पनि उनीहरूलाई नै स्वास्थ्य संस्थाको प्रमुख बनाउने निर्णय गरेको सन्दर्भमा यस अघि देशव्यापी विरोध भएको थियो । त्यही अवस्था अहिले पोखरियामा पाइएको छ । पोनपा–३ वसन्तपुरका वडाध्यक्ष अजय साह कलवारले आयोजना गरेको स्वास्थ्यचौकीसम्बन्धी भेलामा सिनियर अहेबलाई प्रमुख बनाउने निर्णय भएको थियो । सोको विरोधमा एचए अनिल यादवले पोनपा र जिप्रका, पर्सामा उजुरी गरेका थिए । उनले सरकारी निर्णय अनुरूप एचएहरू नै स्वास्थ्य चौकीको प्रमुख हुनुपर्ने माग राखेका थिए । तर त्यो कुराको सुनवाइ भएन । अहिले साउन ९ गते पोखरिया नपाले आपूm अन्तर्गतको पाँचवटा स्वास्थ्य चौकीको प्रमुख सिनियर अहेबलाई तोकेपछि एचएहरूले विरोध गरेका छन् । उनीहरूले आज उपमेयर सलमा खातुनलाई सरकारी निर्णय र कानूनमा भएको व्यवस्थाबारे जानकारी गराउँदै नियम उल्लङ्घन नगर्न सुझाव दिएका थिए । उपमेयर खातुनले नियमसङ्गत काम हुने कुरामा विश्वस्त हुन आश्वासन
कानूनी शिक्षाको अपरिहार्यता र हाम्रो व्यवहार
अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव न्यायको एउटा सिद्धान्त नै हो– कानूनको अनभिज्ञता क्षम्य हुदैन । अर्को सिद्धान्त हो कानून परिवर्तनशील हुन्छ । पहिलो सिद्धान्तको अर्थ के हो भने हरेक नागरिकलाई आप्mनो राज्यको कानूनबारे जानकारी छ । कुनै अपराध गरेपछि कानूनबारे थाहा थिएन । अन्जानमा गल्ती भयो माफी पाऊँ भनेर माफी पाइँदैन । किनभने न्यायले के बुझ्छ भने उसलाई कानून थाहा थियो र थाहा हुँदाहुँदै कानून तोडेको हो । वास्तवमा यो मान्यता अन्यथा होइन, तर यो मान्यतालाई सार्थकता दिने दायित्व राज्यको हो । राज्यले कुनै कानून बनाएपछि जनतालाई सुसूचित गर्नुपर्छ । राजपत्रमा प्रकाशित गरी परिवर्तन भएको कानूनबारे सुसूचित गर्नुपर्छ । तर राजपत्र आम नागरिकको पहुँचभित्र हुँदैन । आम नागरिकले चाहेको बेला पाइँदैन । सरकारले कानूनको किताब छापेर पनि बिक्रीको लागि पठाउँछ । यसले पनि सरकारले जनतालाई कानूनको जानकारी गराउने सन्दर्भमा गरेको सार्थक कदम भनी दाबी गर्न सकिन्छ तर वास्तविकता के छ भने प्रकाशित हुने राजपत्र सबै वकिलको पहुँचभित्र छैन । सबै सरकारी कार्यालयको पहुँचभित्र पनि हुँदैन भने आम जनताको पहुँचभित्र कसरी हुन्छ । राजधा
मितेरी पुलको दुरवस्था
भारत सरकारले बनाएको पुल, जसलाई नेपाल–भारतको भूसन्धिको प्रतीकस्वरूप मितेरी पुल भनिएको छ, अहिले जीर्ण अवस्थामा पुगेको छ । जीर्ण अवस्थामा पुग्नुको अर्थ हो, समयमा त्यसको मरम्मतसम्भार भइरहेको छैन वा पुलको क्ष्Fमताभन्दा बढी सवारी साधनहरूको आवतजावत छ । भारत सरकारको लगानीमा बनेको हुँदा गुणस्तरमा कमी भयो भन्न मिल्दैन । तर अहिले पुल बाह्यरूपमा जर्जर अवस्थामा पुगेको छ । कतिसम्म भने पुलमाथि नै ठूल्ठूलो भ्वाङ परेर गाडीहरू त्यसमा फस्ने गरेको छ । यस्तै एउटा भ्वाङमा भर्खरै त्यसमा एउटा एम्बुलेन्स अडकिएको थियो । एम्बुलेन्स वीरगंजबाट बिरामी लिएर रक्सौल जाँदै थियो । मानिसहरूको उपस्थिति भएको बेला यो घटना भएकोले विभिन्न उपायले एम्बुलेन्स झिकियो । यदि यो घटना राति भएको भए, बिरामी अलपत्र पर्ने निश्चित थियो । रातिकै कुरा किन गर्ने, दिउँसै पनि आपत्कालीन बिरामी लिएर तत्काल अस्पताल पु¥याउन नसक्दा जोखिम हुने अवस्था रहेको भए के हुन्थ्यो ? सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ । किनकि वीरगंजको चाला त सबैलाई थाहा छ, बिरामीबाट सकुन्जेल पैसा धुत्यो र बिमारी नियन्त्रणबाहिर गयो कि बाहिरी अस्पताललाई रेफर गरिदियो । यो एउटा पक्ष्
२०७५ साउन १४ गते सोमवारको प्रतीक दैनिक
महानगरले गरेको करवृद्धिविरुद्ध वीउवासङ्घको अगुवाइमा प्रदर्शन
सोमवार वीउवासङ्घ र महानगरपालिकाबीच वार्ता वीउवासङ्घ र महानगरबीच करवृद्धि सम्बन्धमा वार्ता हुने भएको छ । आज उद्योग वाणिज्य वाणिज्य सङ्घको अगुवाइमा वस्तुगत सङ्घसंस्थाहरू सम्मिलित बैठकले महानगरसँग वार्ता गर्ने निर्णय गरेको वीउवासङ्घका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्माले बताए । बैठकपछि मेयर सरावगीले साउन १४ गते १० बजे महानगरपालिकामा वार्ता गर्ने समय दिएका छन् । वार्ताबाट समस्याको समाधान हुने विश्वास राखिएको र नभए आन्दोलनको विकल्प नरहने वीउवासङ्घका अध्यक्ष शर्माले बताए । प्रस, वीरगंज, १३ साउन/ वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घको आह्वानमा वीरगंज महानगरपालिकाले गरेको करवृद्धिको विरोधमा आज व्यापक प्रदर्शन भएको छ । घण्टाघरबाट निस्केको विरोध जुलुस महानगरपालिकाको गेटमा गएर मेयर विजय सरावगीलाई ज्ञापन बुझाएर समापन भएको थियो । वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घलगायत विभिन्न सङ्घसंसथाको सहभागितामा निस्केको जुलुसमा ब्यानर, प्लेकार्डसहित सहभागीहरूले कबाडी कर खारेज गर्न माग गरेका थिए भने महानगरले सबै करहरूमा गरेको व्यापक वृद्धिको विरोध गर्दै खारेज गर्न माग गरेका थिए । घरजग्गा, सवारी, कबाडी करलगायत श
भारत–नेपालको मितेरी पुल जीर्ण, ठाउँठाउँमा खाल्डाखुल्डी, फस्न थाल्यो सवारी साधन
राजेश केशरीवाल,रक्सौल,१३ साउन/ भारत–नेपाल सीमाको वीरगंज–रक्सौल जोडने मितेरीपुल जीर्ण बन्नुको साथै यो रुट भएर यात्रा गर्नु जोखिमपूर्ण बनेको छ । पुलमा ठाउँठाउँमा खाल्डाखुल्डी छ भने अब उक्त खाल्डाखुल्डीमा सवारी साधन फस्दा यात्रुहरूको ज्यानमा पनि जोखिममा पर्ने गरेको छ । आइतवार वीरगंजबाट एउटा एम्बुलेन्स रक्सौल गइरहेको थियो । मितेरी पुलको दक्षिण क्षेत्रमा बनेको खाल्डोमा फस्यो । उपचारको लागि बिरामी बोकेको एम्बुलेन्सलाई प्रहरी प्र्रशासनको सहयोगमा टुचन गरी तानिएको थियो । उक्त बाटो भएर साइकल, मोटरसाइक, रिक्सा, टाँगा, इ–रिक्सा टेम्पुलगायत सवारी साधन चलाउन गा¥हो हुने सवारी चालकहरू बताउँछन् । पुलको मरम्मत सम्भारको दायित्व दुवै देशको भए पनि पुलको लामो समयदेखि मरम्मत भएको छैन । सवारी चालह तथा यात्रुहरूले मितेरी पुल आसपासको सडक अविलम्ब मरम्मत गर्न आग्रह गरेका छन् । मितेरी पुलको क्षेत्र दुवै देशमा पर्ने भएकोले दुवै देशका अधिकारी तथा जनप्रतिनिधिहरूको उचित समन्वयको अभावमा रक्सौल–वीरगंज जोड्ने मितरी पुल आसपासको यो दुरवस्था भएको रक्सौलका महेश अग्रवाल बताउँछन् ।
आऔं मिलेर केटाकेटीहरूलाई सफल बनाऔं
अनन्तकुमार लाल दास शिक्षा प्राप्त गर्नु सतत प्रयास हो । यो सही शैक्षिक वातावरणबाट मात्र हासिल हुन्छ, किताबबाट होइन । आज नेपालमा उम्दा किसिमका विद्यालयहरू हुँदाहुँदै यहाँका विद्यार्थी हरेक वर्ष भारत लगायत अन्य मुलुक गइरहेका छन् । के यहाँका विद्यालय र क्याम्पसहरूले उनीहरूलाई त्यो शिक्षा दिन सक्दैन जुन अन्य मुलुकमा गएर उनीहरूले हासिल गर्छन् ? के उनीहरू त्यहाँ गएर शतप्रतिशत सफल नै भइरहेका छन् ? जो त्यहाँ सफल हुन्छन् के उनीहरू यहाँ सफलता हासिल गर्न सक्दैनन् ? भनिन्छ टाढा बजिरहेको ढोलको आवाज मीठो हुन्छ । के त्यस्तै ढोल बाहिरी मुलुकका विद्यालय वा क्याम्पसहरूले बजाउने गरेका त छैनन् ? यस्ता थुप्रै सवाल छन् । तर यस लेखमा त्यसको जवाफ खोज्ने जमर्को गरिएको हैन । यस आलेख मार्पmत् के भन्न खोजिएको हो भने हठ स्वयंसँग गर्नुपर्छ । हठ आप्mनै देशलाई कसरी शैक्षिक हब बनाउने भन्ने हुनुपर्छ । हठ देशको शैक्षिक सुधारका लागि गर्नुपर्छ । हठ वास्तविक मुद्दा उठाउनको लागि गर्नुपर्छ । हठ अरूलाई डराउनको लागि होइन, एक अर्कामा जोश बढाउनको लागि गर्नुपर्छ । हठ मिलेर अघि बढ्नको लागि गर्नुपर्छ । हठ नेपाललाई सुखी र समृद
पर्सा जिल्ला मात्र होइन, एकताका पहाड क्षेत्रको भारतसँग मानिस वा सामानको सम्बन्ध जोड्ने ठोरी अहिले यति एक्ल्याइएको छ कि प्रत्येक वर्षात्मा उसको सदरमुकाममात्र होइन, बाँकी जिल्लासँग पनि सम्बन्ध विच्छेद हुने गरेको छ । पहिले ठोरी यस भेगको व्यापारिक नाका नै थियो । पहाडमा उत्पादन हुने विभिन्न मालवस्तु भारत जाने र भारतबाट ती सामान पहाड पठाउनका लागि मुख्य बजार नै ठोरी थियो । ठोरीको अवस्थिति अलि अग्लोमा भएको, यसलाई चारैतिर नदीले घेरेकोले यो यसै पनि टापूजस्तो छ । त्यसैले पनि होला, यो पछिका दिनमा पछिल्लो प्राथमिकतामा पर्दै गयो । नयाँ र सुविधाजनक नाकाहरू खुलेपछि झन् यो एक्लियो । जबकि ठोरीमा यति अपार सम्भावना छ कि थोरै मात्र लगानीमा यो जिल्लामात्र होइन, यस भेगको रमणीय र पर्यटकीय ठाउँ बन्न पुग्छ । ठोरीलाई राज्य र जिल्लाले मात्र होइन, प्रकृतिले पनि जोखिमपूर्ण बनाइदिएको छ । वर्षात्मा यहाँबाट बाहिर निस्कनु र बाहिरबाट ठोरी पुग्नेलाई बहादुरकै संज्ञा दिन सकिन्छ । यस बेला यसको निकासको एउटामात्र मार्ग भनेको खोला पारिको भारतको भिखना ठोरीको रेलसेवा वा सडकसेवा हो । लामो समयसम्म ठोरीलाई जिल्लाको अन्य भाग
२०७५ साउन १३ गते आइतवारको प्रतीक दैनिक
दुई स्थानमा रक्तदान २८ महिलासहित २९५ जना सहभागी
प्रस, वीरगंज, १२ साउन/ रक्त सञ्चार दिवसको अवसरमा शनिवार वीरगंजको दुई स्थानमा भएको रक्तदान कार्यक्रममा २८ जना महिलासहित २९५ जनाले रक्तदान गरेका रक्त सञ्चार केन्द्र वीरगंजका प्रमुख प्रवीण मानन्धरले बताए । जैन श्वेताम्बर तेरापन्थ सभा वीरगंजले ५९औं तेरापन्थ दिवसको अवसरमा तेरापन्थ भवन आदर्शनगरमा आयोजना गरेको रक्तदान कार्यक्रममा २६ महिलासहित २१९ जनाले रक्तदान गरेका थिए । तेरापन्थ सभा वीरगंजका अध्यक्ष राजकुमार बैदको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा पर्साका प्रजिअ लोकनाथ पौडेल, नेपाल पत्रकार महासङ्घ पर्साका अध्यक्ष श्याम बन्जारा, वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वअध्यक्ष अशोक बैदलगायतको सहभागिता थियो । कार्यक्रममा रश्मी अग्रवाल, रेखा बैद, डा गणेश अग्रवाल, विवेक बैद, कृष्णानन्द कुशवाहा, आरती साह, सुनीता देवी, मुना भट्टराई, रजनी गुरुङलगायतले रक्तदान गरेका थिए । यसैगरी, न्यू ज्योति युवा क्लब वीरगंज महानगरपालिका–१ बजार छपकैयाले आयोजना गरेको रक्तदान कार्यक्रममा २ महिलासहित ७६ जनाले रक्तदान गरेको ब्लोदान पर्साका सचिव अरबिन्द सिंहले बताए । क्लबका अध्यक्ष सुमन पटेलको अध्यक्षता र
कर वृद्धिको विरोधमा चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा
प्रस, वीरगंज, १२ साउन/ वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घले पत्रकार सम्मेलन गरी वीरगंज महानगरले करको दरमा गरेको वृद्धिको विरोधमा चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको छ । सङ्घका अध्यक्ष्F ओमप्रकाश शर्माले पत्रकार सम्मेलनमा आपूmले लिखित तथा मौखिकरूपमा मेयर विजय सरावगीलाई महानगरले करको दरमा गरेको वृद्धि सम्बन्धमा पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएकोमा बेवास्ता गरिएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रनुको विकल्प नरहेको बताए । उनले आइतवार वीरगंजका पसलहरू बन्द गर्ने र घण्टाघरबाट विरोध जुलुस प्रदर्शन गर्दै महानगरका मेयर सरावगीको कार्यकक्ष घेराउ गरी ज्ञापन दिने कार्यक्रम रहेको जानकारी गराए । अध्यक्ष्F शर्माले महानगरपालिकाले एकीकृत सम्पत्ति कर अन्तर्गत घरजग्गा र मालपोतमा अत्यधिक कर वृद्धि गरेको आरोप लगाए । उनले गत वर्ष रु १३ हजार कर तिरेका महानगरवासीले यसपटक सोही कर रु ९३ हजारसम्म तिर्नुपरेको उदाहरण प्रस्तुत गरे । अध्यक्ष शर्माले नेपाल सरकार तथा स्थानीय सरकारले कर असुलीमा एकरूपता नल्याएको भन्दै दुःखेसो पोखे । उनले वीरगंज महानगरको जुन जग्गाको मूल्याङ्कन मालपोत कार्यालयले रु १ करोड तोकेकोमा सोही जग्गाको मूल्याङ्कन महानगर
रेलवे सडक निर्माणको प्रतिबद्धतापछि अनशन तोडियो
राजेश केशरीवाल, रक्सौल, १२ साउन/ नेपाल–भारत सीमावर्ती शहरको रक्सौल रेलवे स्टेशन जाने सडकको मरम्मत र सरसफाइको माग गर्दै शुक्रवारदेखि शुरु गरिएको अनशन आज शनिवार तोडिएको छ । बाटा चोकदेखि रेलवे स्टेशन जाने सडकखण्ड अन्तर्गत रामजी चोकमा रक्सौलका अधिकारकर्मी रञ्जीत सिंहको टोली अनशनमा सहभागी थियो । सहभागीहरूलाई जुस खुवाएर भारतीय रेलवे नरकटियागंजका सहायक डिभिजन प्रमुख मन्टु कुमारले अनशन तोडाएका थिए । मध्याह्न पौने १२ बजे अनशन तोडिएको घोषणा भएको थियो । डिसेम्बर ६ पश्चात् उक्त सडकको सरसफाइ गरी ६ मिटर चौडाइको पिसिसी ढलान गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाएपछि अनशन टुङ्गिएको हो । अनशन तोडाउन रक्सौल स्टेशन सुपरिटेन्डेन्ट अनिलकुमार सिंह, आइओडब्लु तपस राय, आरपिएफ इन्स्पेक्टर राजकुमार, रेलवे थाना अध्यक्ष अनिल कुमारलगायतले सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।
विशाल फाउन्डेसनको साधारणसभा
प्रस, वीरगंज, १२ साउन/ विशाल मेमोरियल फाउन्डेसन वीरगंजको प्रथम साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । अखिल नेपाल पूmटबल सङ्घका अध्यक्ष्F कर्मा छिरिङ शेर्पाले साधारणसभाको उद्घाटन गरेका थिए । फाउन्डेसनका अध्यक्ष रूपक पाण्डेको अध्यक्षतामा सम्पन्न उद्घाटन सत्रमा एन्फाका उपाध्यक्ष पङ्कज नेम्वाङ, उपेन्द्रमान सिंह, महासचिव इन्द्रमान तुलाधर, नेपाल पत्रकार महासङ्घ प्रदेश नं २ अध्यक्ष्F दिपेन्द्र चौहान, उपाध्यक्ष्F केसी लामिछाने, पर्सा शाखा अध्यक्ष श्याम बन्जारा, नेशनल मेडिकल कलेजका निर्देशक बसरुद्दीन अन्सारी, जिएचपीका ज्याग सिंहलगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । आजै सम्पन्न प्रथम साधारणसभाले अनिलकुमार कलवारको अध्यक्ष्Fतामा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ । कार्यसमितिको वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुलभजङ्ग राणा, प्रथम उपाध्यक्ष्F महम्मद निजामुद्दीन, द्वितीय उपाध्यक्ष बालकृष्ण डङ्गोल, महासचिव निशान्त लामिछाने, सचिव विनोद परियार र कोषाध्यक्षमा मुकेश सिंहलगायत रहेका छन् ।
करको करकर किन ?
ओमप्रकाश खनाल स्थानीय तहले बढाएको करको विरोधमा वीरगंजमा विरोधका कार्यक्रमहरू नै थालिएका छन् । मुलुककै मुख्य प्रवेशद्वार र आर्थिक केन्द्रबिन्दुको रूपमा रहेको वीरगंज पछिल्ला वर्ष कुनै न कुनै अन्तरविरोध र प्रदर्शनको पर्यायको रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ । संविधानविरोधी ६ महिने बन्द, हडताल र नाकाबन्दीपछि यो शहरको पहिचान नै फेरिएको छ । मधेस आन्दोलनपछि छोटै समयान्तरमा मधेसवादीबीचको मतान्तर पनि वीरगंजका सडकमा पोखियो । त्यतिले पुगेन, प्रदेश राजधानीका नाममा आयोजन भएका आन्दोलनका झाँकी पनि देख्ने मौका वीरगंजवासीले पाए । अब सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आइसकेको अवस्थामा यसको सञ्चालन र खर्च प्रबन्धका उपायहरूको विरोधमा पनि फेरि वीरगंज नै तात्तिन थालेको छ । बारा र पर्साका निजी क्षेत्रको वर्गीय संस्था वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घले स्थानीय सरकारको कर नीतिको विरोधमा सङ्घर्ष थालेको छ । सम्भवतः सङ्घीयता कार्यान्वयनपछिको करविरोधी अभियानमा निजी क्षेत्र सडकमा उत्रिएको पहिलो हो । कारण जे भएपनि वीरगंज पुनः प्रदर्शनको स्थल बन्न पुगेको छ । प्रदर्शनका आयामहरू कुन बेला कतातिर मोडिन्छन्, यसै भन्न सकिन्न । वीरगंजको विशे
सत्यको वास्तविक स्वरूप अनुभव गर्नको लागि असत्यको स्वरूप बुझ्न परम आवश्यक छ, किनभने जसलाई रातिको ज्ञान हुँदैन, उसलाई दिनको ज्ञान कसरी हुन सक्छ ? अतः सत्यको यथार्थ ज्ञान भएपछि नै सत्यको अभिलाषीले सत्यलाई बुझ्न सक्छ । जसले असत्यलाई जान्न सक्दैन, उसले सत्यलाई पनि जान्न सक्दैन । संसारका सभ्य समाजले गुणलाई सत्य र दोषलाई असत्य भन्छ, किनभने दोषमा गुणले शासन गर्छ– जस्तै स्थिरता चञ्चलतामा, सदाचार दुराचारमा, योग भोगमा, प्रेम द्वेषमा, त्याग रागमा, संयम असंयममा, आनन्द दुःखमा, चैतन्य जडमा र अहिंसा हिंसामा । यी कुरा विचार गरेपछि प्रश्न उठ्छ गुणले दोषमा कि दोषले गुणमा शासन गर्छ ? यसको उत्तर हो– गुण दोषको अपेक्ष्Fा बढी स्वाभाविक हुन्छ । जसरी आँखाले हेर्नु स्वाभाविक हो, अर्थात् त्यस क्रियामा कर्ताले कुनै प्रकारको भाव बनाउँदैन, तब हेर्नुलाई कहिल्यै दोष भन्न सकिंदैन । त्यो दोष तब बन्छ, जब देखेको रूपबाट सुख प्राप्त गर्ने अभिलाषा उत्पन्न हुन्छ । यद्यपि सुख भेटिदैंन, तर अविचारको कारण बिचरा आँखाले रूपमा सुख खोज्छ, यस कारण अन्त्यमा दुःखी हुन्छ र जसबाट दुःख हुन्छ, त्यही नै दोष हो । इन्द्रिय स्थिर भ
२०७५ साउन १२ गते शनिवारको प्रतीक दैनिक
असार मसान्त सकिए पनि गाउँमा लेऊ–देऊ कार्यक्रम जारी
प्रस, वीरगंज, ११ साउन/ सामाजिक विकास शाखाले गर्ने कार्यक्रमहरू असार मसान्तमा सकिनुपर्नेमा अहिलेसम्म हुँदैछ । असार मसान्तसम्म दैनिक ५ वटाभन्दा बढी कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएका थिए । वीरगंज महानगरलगायत तीनवटा नगरपालिका र १० वटा गाउँपालिकामा यो कार्यक्रम सञ्चालनमा रह्यो । अहिले ग्रामीण क्षेत्रमा असार मसान्त सकिएपछि पनि कार्यक्रमहरू हुँदैछन् । यसो हुनुको कारण संस्थाले अग्रीम पेश्की उठाएकोले नै हो । असार मसान्त सकिएर अहिले साउनको १० गते बितिसकेको छ तर पनि गाउँहरूमा २०७५ असार लेखेर मिति नराखी प्mलेक्स झुन्ड्याएर सामाजिक विकास कार्यक्रम अन्तर्गत तालिम, ¥याली, गोष्ठीहरू भइरहेका छन् । पोखरिया नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नाथु साहले असार मसान्तमा सामाजिक विकासका सबै कार्यक्रमहरू सकिनुपर्ने बताए । उनले मसान्तपछिका समयमा भए गरेका कामहरू गणना नहुने जानकारी गराएका छन् । तर जिल्लामा अहिले पनि स्थानीय तहले यस्ता कार्यक्रमहरू हिजोसम्म सञ्चालन गर्दै आएको छ । कार्यक्रमको लक्ष्य र उद्देश्य परिपूर्ति गर्न नसकेको र केवल कर्मचारी र संस्थाले कमाउने कार्यक्रम मात्र भएकोले सामाजिक विकास कार्यक
सडक हिलाम्य बनेपछि वीरगंजसँग ठोरीको सम्पर्क टुट्यो
प्रस, ठोरी, ११ साउन/ निर्माणाधीन वीरगंज–ठोरी हुलाकी सडकखण्डको मालीबस्तीदेखि विजयबस्तीसम्मको झन्डै १० किलोमिटर बाटो हिलाम्मे बनेपछि जिल्ला सदरमुकाम वीरगंजसँग ठोरी गाउँपालिकाको चार वडाको सडक सम्पर्क फेरि टुटेको छ । सामान्य वर्षा हुनेबित्तिकै सडक हिलाम्य बन्नुका साथै खाल्डाखुल्डीमा पानी जमेपछि सवारीका साधन गुड्न नसक्दा १ देखि ४ वडाको सडक सम्पर्क जिल्ला सदरमुकाम वीरगंजसँग टुटेको स्थानीय युवा सनम श्रेष्ठले जानकारी दिए । हुलाकी सडक आयोजनाले सडक विस्तार गरी माटो भर्ने काम सके पनि ग्राभेलिङ गर्न बाँकी रहेपछि सडक हिलाम्य बन्नुका साथै ठूलाठूला खाल्डाखुल्डी बनेपछि उक्त सडकखण्डमा सवारीका साधन गुड्न नसकेको उनले बताए । हुलाकी सडक आयोजनाले सडकमा माटो भर्ने क्रममा चिम्टाइलो माटो प्रयोग गरेको छ । श्रेष्ठले भने– “चिम्टाइलो माटो हालेकाले सामान्य वर्षा हुनेबित्तिकै उक्त सडकखण्ड धान रोप्नका लागि तयार गरिएको खेतजस्तै हिलाम्य हुन्छ । पैदल हिंड्न पनि कठिन छ । लडेर चोटपटक लाग्ने हो कि भन्ने चिन्ता हुन्छ । दुई पाङ्ग्रे सवारीका साधनसमेत गुड्न सक्ने अवस्था छैन ।” सडक हिलाम्य भएपछि वीरगंजदेखि
श्रीमद्गद्गीता (कर्मसंन्यासयोग) उमाशङ्कर द्विवेदी अर्जुनले भने– “श्रीकृष्ण, तपाईंले कर्महरूलाई संन्यासतिर अनि कर्मयोगको प्रशंसा गर्दै हुनुहुन्छ । त्यसैले यी दुईमध्ये एक जुन निश्चित गरिएको कल्याणकारक छ, त्यसको बारेमा मलाई भन्नुहोस् ।” श्री भगवान्ले भने– “कर्मसंन्यासयोग र कर्मयोग–यी दुवै नै परम कल्याणकारक हुन् तर ती दुईमध्ये पनि कर्मसंन्यासबाट कर्मयोग साधनमा सुगम हुनुको कारण श्रेष्ठ हो । अर्जुन, जो पुरुष न कसैसित द्वेष गर्दछ र न कसैको आकाङ्क्षा गर्दछ, त्यो कर्मयोगी सदैव संन्यासी नै हो किनकि राग–द्वेष द्वन्द्वादिबाट रहित पुरुष सुखपूर्वक संसारबन्धनबाट मुक्त भइहाल्दछ । उपर्युक्त संन्यास र कर्मयोगलाई मूर्खहरूले पृथक–पृथक फल दिने खालको भन्दछन्, पण्डितहरूले त्यसो भन्दैनन् किनकि दुवैमध्ये एकमा पनि सम्यक प्रकारले स्थित पुरुष दुवैको फलको रूपमा परमात्मालाई प्राप्त भइहाल्दछ । ज्ञानयोगीहरूद्वारा जुन परमधाम प्राप्त गरिन्छ, कर्मयोगीहरूद्वारा पनि त्यही प्राप्त गरिन्छ । त्यसैले जो पुरुषले ज्ञानयोग र कर्मयोगलाई फलरूपमा एउटै देख्दछ, त्यसैले यथार्थलाई देख्दछ तर हे अर्जुन, कर्मयोगबिना संन्यास–मन,
कृष्णका पत्नी तथा पुत्रहरू
सञ्जय मित्र कृष्णको नाम जहिले पनि राधासित जोडिन्छ । राधा कृष्णको बाल्यकालको साथी थिइन् । ११ वर्षको उमेरमा राधासित दुई दिनपछि फर्केर आउँछु भनेर गएका कृष्ण कहिल्यै फर्केर आएनन् । ८० वर्षपछि झन्डै ९१ वर्षको उमेरमा कृष्ण भएकै ठाउँमा राधा पुगेकी थिइन् । त्यतिखेर महाभारत युद्ध सिद्धिसकेको थियो । महाभारत युद्ध सकिएको केही समयपछि युद्धभूमिको भयङ्कर अवस्थालाई देखेर कृष्ण विह्वल र विक्षिप्त बनेका थिए । कृष्णलाई राधाले भेटेपछि त्यहीं प्राणत्याग गरेकी थिइन् । सामान्य वार्तालाप भएको थियो, दुई बीच । दुवैले जीवनको त्यो घडीमा आप्mना बाल्यकाललाई सम्झेका थिए । दुवैले सुन्दर बाल्यकाललाई सम्झेर एकार्कालाई नदेखाउने गरी अश्रुधार चुहाएका थिए । दुवैले रोएको दुवैले थाहा पाइसकेका थिए । आँखा देख्न नसक्ने भइसकेकी राधाले कृष्णको सबै कुरा देखिरहेकी थिइन् । राधाको देहत्यागले कृष्ण झन् असह्य वेदनाले छटपटिएका थिए । आप्mनो युगका नायक कृष्ण थिए । उनको नायकत्वलाई वर्तमान युगले पनि स्वीकार गरेको छ भने तत्कालीन विश्वले प्रेम र भय दुवै कारणले स्वीकार गरेको थियो । सबै किसिमका दुःख र सबै किसिमका सुखभोग गरेका कृष
प्राचीन मिथिलाको भौगोलिक सिमाना– एक चर्चा
डा. बासुदेवलाल दास, पीएच.डी. सहप्राध्यापक, इतिहास विभाग ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पस, वीरगंज भौगोलिक दृष्टिकोणले विचार गर्दा प्राचीनकालमा विदेह, तीरभुक्ति (तिरहुत) अथवा मिथिला इत्यादि संज्ञाद्वारा अभिहित क्षेत्रको रूपमा विख्यात रहेको भूभाग वर्तमान समयमा नेपाल र भारत गरी दुई सार्वभौम राष्ट्रका भूमिको रूपमा विद्यमान रहेको छ । यस भूभागमा निवास गर्ने मानिसहरूको राजनीतिक पहिचान दुई देशका नागरिकको रूपमा रहे तापनि सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहिचान र क्रियाकलापहरू समान नै रहेका छन् । जसको श्रेय, भनिन्छ कि, यस क्षेत्रको ऐतिहासिक भूगोललाई जान्छ । यस प्रकार, यस क्षेत्रको ऐतिहासिक भूगोलबारे चर्चा गर्दा यसको भौगोलिक सिमानाको सम्बन्धमा उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ, जसका लागि यस भूभागको प्राचीनकालको इतिहासको जानकारी आवश्यक हुन्छ । यस सन्दर्भमा यस क्षेत्रको प्राचीन नाम विदेह रहेको कुरा विभिन्न स्रोतहरूबाट जानकारी पाइन्छ । यस क्षेत्रमा आर्यहरूको सर्वप्रथम सम्पर्क भएको भूभाग विदेह नै थियो । विश्व साहित्यको सर्वप्राचीन रचना मानिएको ऋग्वेदमा विदेह शब्दको स्पष्ट उल्लेख नभए तापनि वैदिक वाङ्मय अन्तर्गत मानिने
तनावमा बित्दैछ सबैको जिन्दगी
वैद्यनाथ ठाकुर यतिबेला साउनको दोस्रो साता चल्दैछ । आकाशमा बादल जति धेरै देखिए पनि त्यति पानी परिरहेको छैन । तापक्रम बढेर दिउँसो ३९ डिग्री सेल्सियससम्म पुगेको छ । गर्मीले मानिसहरूको हाल बेहाल छ । यस्तोमा सरकारी अस्पताल तथा निजी क्लिनिकमा रोगीको चाप निकै बढेको छ । गर्मीबाट उत्पन्न हुने रोगहरू खासगरी घाउ, आउ, झाडापखाला, ज्वरो, रुघाखोकी, छालाका विभिन्न सङ्क्रमण, रक्तचाप र मधुमेहको स्तर एकाएक बढ्दा सबै वर्ग, तह, तप्काका मानिसको लागि तनावको विषय भएको छ । यतिबेला कडा घामले गर्दा मानिसहरू घरबाहिर निस्किन पनि धेरैपटक सोच्नुपर्ने अवस्था छ तर यस्तोमा वीरगंज महानगरपालिकाले नगरवासीहरूलाई प्रत्येक दिन भोलि आउनुस्, कम्प्युटर अपडेट भइरहेको छ आज कर बुभिंmदैन भन्दै बोलाउने अनि फर्काउने गरेर थप तनाव दिएको छ । यतिबेला सबैतिर तनाव नै तनाव देखिन्छ । झापाको एक निजी अस्पतालको कार्यक्रममा उक्त अस्पतालका एक जिम्मेवार व्यक्तिले बङ्गलादेशबाट उत्तीर्ण गरेर आउने महिला विद्यार्थीहरूले अस्मिता नै सुम्पेर प्रमाणपत्र लिनुपर्ने अवस्था रहेको छ भनेर थप तनाव उत्पन्न गरिदिएका छन् । सोही कार्यक्रममा कानूनमन्त्र